Imata tolọọrụ Gburugburu Ebe Obibi na Atụmatụ gbasara Ọgbọ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Junta de Andalucía bụ ụlọ ọrụ ebe a na-ahazi ọchịchị onwe nke Autonomous Community. Ọ bụ ndị omeiwu Andalusia, ndị isi oche nke Board na Council Council.
La Nchịkwa nke Junta de Andalucía a haziri ya na ndị nkuzi ndị a:
Kansụl nke ndị isi na nchịkwa mpaghara.
Ministry of Economy na Ihe Ọmụma.
Ministri Ego na Nchịkwa Ọha.
Ozi nke Mmụta.
Council for Equality and Social Atumatu.
Ministry of Employment, Azụmaahịa na Azụmaahịa.
Ministri nke mmepe na ulo.
Ozi nke njem na egwuregwu.
Ozi nke Omenala.
Ministri Okwu Ikpe na Ime.
Ozi nke Ugbo.
Ozi nke Gburugburu Ebe Obibi na Atụmatụ gbasara Ohere.
N’isiokwu a anyị ga-elekwasị anya na nke abụọ ka ị nwee ike ịmata ya nke ọma.
Nke mbụ bụ ịmara na Mịnịstrị a nwere ikike nke Obodo Kwesịrị Ekwesị n'ihe metụtara gburugburu ebe obibi, mmiri, nhazi ohere na ime obodo na ime obodo.
Ulo oru a gunyere mmiri, ogo gburugburu ebe obibi, ichu nta na ichu azu, ihu igwe na mgbanwe ihu igwe, mmuta gburugburu ebe obibi na ndi oru aka, mpaghara echedoro, oku oku ohia, gburugburu ebe obibi, na atumatu na nhazi obodo.
1 Ọrụ na ike
2 Nhazi usoro
2.1 Tù Na-achị Isi
2.1.1 Osote Onye Ozi
2.1.2 Isi General maka Atụmatụ gbasara Spatial na Nkwado Obodo
2.1.3 Isi Secretary General maka Gburugburu Ebe Obibi na Mgbanwe Ihu Igwe
2.1.4 Secretary General General
2.2 Ndị ọrụ mmekọ
2.2.1 Ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na mmiri (AMAYA)
2.2.2 Ntọala maka mmepe mmepe nke Doñana na gburugburu ya-Doñana 21
2.3 Ahụ ndị Collegiate
2.3.1 Council nke Andalusia maka gburugburu
2.3.2 Ndị Andalusia biodiversity Council
2.3.3 Kansụl Mmiri Andalusia
2.3.4 Kansụl nke Andalusia maka Atụmatụ gbasara Spatial na Urbanism
2.3.5 Ritlọ Ọrụ ritlọ Ọrụ maka Atụmatụ gbasara Ndụ na Atụmatụ Obodo
2.3.6 Territorial Observatory nke Andalusia
2.3.7 Isslọ Ọrụ Nhazi Obodo Obodo
Agbanyeghị, na mpaghara ọ bụla ndị Minista na-eme ihe site n'aka ndị nnọchi anya Territorial nke nwere ihe ndị a ọrụ na ikike na mpaghara mpaghara gị:
Nkịtị nnọchite nke Ngalaba onye ọrụ ọrụ ya dị na Njikọ Territorial, yana ebe o kwesịrị ekwesị, site na ụlọ ọrụ ndị metụtara ma ọ bụ dabere na Ngalaba ahụ.
Na-eduzi, n'okpuru nkwado ndabere nke ụlọ ọrụ njikwa kwekọrọ, ngalaba nhazi nke ndị nnọchi anya.
Iji duzie ndị isi nke ndị ọrụ niile na ndị nkịtị na njikwa ikike nke otu enyere ya.
Guzobe uzo ozo nke mmekorita ya na ndi isi oru nke ndi Ministri ndi oru ha di na Territorial Delegation na, n’enweghi obi ojoo banyere ikike ndi ndi ochichi nke ndi ochichi nke Junta de Andalucía, tinyere ndi isi nke General. Nchịkwa steeti na mpaghara mpaghara nke Andalusia n'ihe metụtara ikike ha.
Nyefee iwu na ntuziaka n'okwu ndị dị n'ikike ya nye ndị isi nke ndị odeakwụkwọ General Provincial nke Ministri ndị ọrụ ọrụ ha dị na Njikọ Territorial.
Omume nke ikike nhazi banyere ikike ndị ahụ metụtara ha na, ebe o kwesịrị ekwesị, gbasara ikike ndị ọrụ mpaghara ahụ enyere ha.
Na mgbakwunye na ọrụ ndị ọzọ a na-ekwu, na-achịkwa ma ọ bụ nyefere ha.
Oriri ihe eji arụ ọrụ nke Mịnịstrị nke Gburugburu Ebe Obibi na Atụmatụ gbasara Ọdịtọ Spasial guzobere site na Iwu 216/2015, nke July 14, nke na-eme ka o doo anya na ikike ndị ahụ e kwuru n'elu kwekọrọ na Ngalaba ahụ.
N'otu aka ahụ, Iwu a na-achịkwa omume nke Mịnịsta a site n'aka ndị isi njikwa, ụlọ ọrụ na ngalaba ndị jikọrọ ọnụ na ya.
Ugbu a, Mịnịsta nke Gburugburu Ebe Obibi na Atụmatụ gbasara Ndụ bụ José Fiscal López.
Tù Na-achị Isi
Onye isi nke Mịnịstrị ahụ na-anọchite anya otu ihe ahụ ma na-egosipụta nduzi dị elu, ebumnuche, nhazi, nyocha na nyocha nke ọrụ ya.
Maka nkwado na enyemaka ozugbo nye onye isi nke Mịnịsta ahụ nwere Cabinet nwere ihe mejupụtara nke ụkpụrụ akọwapụtara.
Lọ Ọrụ Na-ahụ Maka Gburugburu Ebe Obibi bụ:
Osote Onye Ozi
Ọ na-egosipụta onye ndu kachasị elu nke Minista na nnọchi anya nkịtị nke otu ihe mgbe onye jidere ya, kwekọrọ na ndị nnọchi anya izugbe nke a.
Isi General maka Atụmatụ gbasara Spatial na Nkwado Obodo
O nwere ọkwa nke Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ, ọ bụ ọrụ maka ntuziaka, ịhazi na njikwa ọrụ nke General Directorate nke Urbanism. Ọ bụ ọrụ maka ịkwalite na ịhazi mmezu nke ebumnuche na mmezu nke omume metụtara ihe ndị tozuru etozu.
Isi Secretary General maka Gburugburu Ebe Obibi na Mgbanwe Ihu Igwe
N'otu aka ahụ, ọ nwere ọkwa nke Onye nlekọta Ozi. Ekwuru na ntuziaka, nhazi na njikwa nke ọrụ ndị otu etiti na-achị isi:
Onye isi nchịkwa maka njikwa nke gburugburu ebe obibi na oghere echekwara.
General Directorate nke Mgbochi na Ogo Gburugburu.
General Directorate nke atụmatụ na njikwa nke Public Hydraulic Domain.
The General Directorate nke Infrastructures na Nrigbu Mmiri.
Secretary General General
O nwere ikike a kapịrị ọnụ n'ihe metụtara imepụta ụkpụrụ na enyemaka iwu, n'ihe metụtara nketa, ọrụ mmadụ, njikwa akụ na ụba na akụnụba yana ọrụ ndị ọzọ.
Ndị ọrụ mmekọ
Ejikọtara Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Gburugburu Ebe Obibi na Mmiri na Mịnịstrị nke Gburugburu Ebe Obibi na Atụmatụ gbasara Ebe. (AMAYA) na Ntọala maka mmepe mmepe nke Doñana na ya Gburugburu-Doñana 21.
Ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na mmiri (AMAYA)
Nke a bụ a ụlọ ọrụ azụmahịa ọha na eze na ụlọ ọrụ aka nke ahụ na-enye ọrụ dị mkpa na mpaghara nke gburugburu ebe obibi na mmiri na Andalusia, ọkachasị n'ihi mberede nke ekwuputara.
Agencylọ ọrụ ahụ nwere ike ịmalite ọrụ ná mpụga ókèala Andalusia na mmezu nke mmemme na nkwekọrịta mmekọrịta nke Administrationlọ Ọrụ nke Junta de Andalucía bịanyere aka na ya.
Ebumnuche nke Agencylọ Ọrụ ahụ bụ iji aka ya ma ọ bụ site na ọha ma ọ bụ nkeonwe nke ọ na-ekere òkè na ya, ọrụ ndị metụtara nchebe, nchekwa, mmụba ma ọ bụ mmelite nke gburugburu ebe obibi na mmiri, yana ọrụ ọ bụla ọzọ a na-emefu ego. , mmeju, mmepe ma ọ bụ nsonaazụ nke ekwuru na mbụ.
Ntọala maka mmepe mmepe nke Doñana na gburugburu ya-Doñana 21
Doñana 21 bụ ntọala nke mpaghara ọha Andalus na-eme dị ka ụlọ ọrụ mmepe obodo, na oku nke ịbụ akara maka njikwa nke akụ bara uru nke mpaghara Doñana.
A mụrụ ya n'okpuru nduzi nke M Sustainable Development Plan nke Doñana ma nọrọ n'okpuru nchebe nke Junta de Andalucía.
Governtù na-achịkwa ntọala ahụ bụ Board of Trustees, nke ndị etiti na nke kwụ ọtọ, ndị kansụl obodo iri na anọ nke Mpaghara, ndị otu azụmahịa na ndị otu ego dị iche iche nọchiri anya ha.
Ntọala Doñana 21 na-ezube ime ka ogbugbu nke ọrụ siri ike na nke bara uru bụrụ eziokwu nke na-enye ohere mmepe mmepe mmekọrịta obodo na mpaghara Doñana, nwere nzube abụọ:
Omume ọha na nke onwe maka mmepe mmekọrịta akụ na ụba nke mpaghara Doñana.
Ike ndi mmadu iji nweta mmekorita nke ala, mmepe na nchekwa nke Doñana.
Ahụ ndị Collegiate
Na mkpokọta enwere ụfọdụ 7 ndị metụtara kọleji gaa na Ministry nke Environment na Spatial Planning na ndị a bụ:
Council nke Andalusia maka gburugburu
Emepụtara ya dị ka ndị na-elekọta mmadụ na-ekere òkè nke nwere ike ijikọ ma kwalite nsonye nke ndị ọrụ mmekọrịta dị iche iche nwere mmasị n'okwu metụtara gburugburu ebe obibi na Community anyị.
Ndị Andalusia biodiversity Council
Ọ bụ òtù na-ahụ maka ndụmọdụ na nlekota na-akwalite nsonye metụtara nchekwa na nchekwa nke gburugburu ebe obibi.
Jikọrọ ọnụ nke ochie ọhịa na ịchụ nta.
Kansụl Mmiri Andalusia
O bu ndi chokolas a maka ndumodu na ndumodu nke ndi ochichi Andalusia banyere okwu mmiri. A na-achịkwa iwu ya na ọrụ ya site na Iwu 477/2015, nke Nọvemba 17.
Kansụl nke Andalusia maka Atụmatụ gbasara Spatial na Urbanism
Ọ bụ otu ndị na-achịkọta ihe na-eme ka ndị mmadụ na-emekọrịta ihe. A na-achịkwa ya site na Iwu 36/2014, nke February 14, nke na-achịkwa ikike nke Nlekọta nke Junta de Andalucía n'ihe gbasara Atụmatụ gbasara Ọpụpụ na Atụmatụ Obodo.
Ritlọ Ọrụ ritlọ Ọrụ maka Atụmatụ gbasara Ndụ na Atụmatụ Obodo
Ha bụ òtù ndị a na-achịkọta ọnụ na mpaghara mpaghara nke usoro ịgba izu na ime mkpebi. A na-achịkwa ha site na Iwu 36/2014, nke February 11.
Territorial Observatory nke Andalusia
Ọ bụ ndụmọdụ ndụmọdụ n'okwu gbasara atụmatụ gbasara mbara igwe. Njirimara ya bụ nlekota, nyocha na atụmanya nke mpaghara Andalus na atụmatụ ya, nzụlite ya na omume ya, yana mmetụta nke amụma na omume ọha na eze na ya nwere na ya.
Isslọ Ọrụ Nhazi Obodo Obodo
Ha bu aru ndi agbakoro n'usoro ochichi, ya na oru ichikota. Kọmịshọn a bụ ọrụ maka ịnata arịrịọ maka akụkọ, echiche ma ọ bụ ụdị nkwupụta ndị ọzọ nke ndị ọrụ tozuru etozu na ndị ọrụ nke Gọọmentị nke Junta de Andalucía ga-enye ha maka ngwa atụmatụ izugbe na ihe ọhụụ ha na-emetụta njikwa usoro, yana dị ka ha Ntuziaka ka ndị eru nchịkwa maka nhazi nke kwuru atụmatụ.
con nnwere onwe nke ndị ụlọ ọrụ kọleji asaa a ekwuola, Iwu 477/2015, nke Nọvemba 17, nke na-achịkwa dieslọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa na Nlekọta Ọha na Nchịkwa Mmiri nke Andalusian na-akọwapụta na edemede 8 na collegiate ozu maka nhazi na-elekọta mmadụ na-ekere òkè nke a uwa mkpebi, ndị ndụmọdụ, njikwa, njikwa na nhazi nke oflọ Ọrụ Mmiri Andalusia bụ ndị a:
A na-esonye Council Council nke Andalusian.
Observatory nke Mmiri.
Kọmịshọn ndị ikike tozuru oke.
Kọmitii nlekota maka mgbochi nke ide mmiri.
Ndị Ome mmiri na Mmiri nke Hydrographic Demarcations.
Commlọrụ maka Nchịkwa Ọkọchị.
Ndị na-adịgide adịgide Cabinet.
Kọmịshọn maka nrigbu nke nnyefe Guadiario-Guadalete.
Na nchịkọta a chịkọtara, nke a bụ nzukọ nke Ministry of the Environment and Spatial Planning, enwere m olileanya na ịgụ akwụkwọ ahụ emeghị ka ị dị arọ n'ihi na ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » General » Imaara Ministri nke Gburugburu Ebe Obibi na Atụmatụ gbasara Ohere
Gbọ ala eletriki: ihe niile ịchọrọ ịma